Yintoni iHolo yeSikhumbuzo se-Ozaki Shiro? | IHolo yeSikhumbuzo ye-Ozaki Shiro
Cofa apha ukuze ufumane ulwazi lomboniso
Shiro Ozaki Isifinyezo Incwadi Yonyaka
Ngo-1898 (uMeiji 31)
Uzalelwe kwilali yaseYokosuka, kwiSithili saseHazu, kwiPhondo laseAichi (okwangoku yiKira Idolophu).
Wangena kwiYunivesithi yaseWaseda (kwezopolitiko).
Ngo-1923 (iTaisho 12)
Ngengcebiso kaHidenobu Kamiizumi, wazinza ngo-1578 Nakai, Magome-mura, Ebara-gun noChiyo Fujimura (Uno), awadibana naye kunyaka ophelileyo.
Ngo-Okthobha, kubhengezwe "Iphupha elibi".Yasunari Kawabata uyayixabisa kakhulu.
Ngo-1930 (iShowa 5)
Uqhawule umtshato neChiyo Uno.Utshatile uKiyoko Koga kwaye wazinza eSanno Omori.
Ngo-1932 (iShowa 7)
Ifuduselwe kuOmori Genzogahara.Yila Umbutho weOmori Sumo.
Ngengcebiso kaHidenobu Kamiizumi, "iTheatre yoBomi" (kamva "uHlelo loLutsha") yahlelwa kwi "Miyako Shinbun".
Ngo-1934 (iShowa 9)
"I-Sequel Life Theatre" (kamva "Inkanuko") ilandelwa kwi "Miyako Shinbun".
Ngo-1935 (iShowa 10)
Ipapashwe "Life Theatre" nguTakemura Shobo, ehlelwe nguKazumasa Nakagawa, owayephethe imifanekiso.
Ngokukhawuleza ukuba uYasunari Kawabata ayincome, yaba yeyona nto ithengiswa kakhulu.
Ngo-1937 (iShowa 12)
Kunye "neLizwe leKhephu" lika-Yasunari Kawabata, uphumelele i-3 Literary Thought Award kwi "Life Theatre".
Ngo-1954 (iShowa 29)
Isuswe kwi-Ito yaya kwi-1-2850 Sanno, Ota-ku (indawo yangoku).
Ngo-1964 (iShowa 39)
Nge-2 kaFebruwari, wahlonitshwa njengoMntu weNkcubeko kwiKhaya likaSanno Omori ngomhla ophambi kokusweleka kwakhe.